China Architecture cable mesh orinasa sy mpamatsy | Gepair mesh
Architecture tariby tariby
Ny tariby stainless vy Architecture tariby dia mangarahara sy manavao, azo ampiasaina amin'ny karazan-dahatsoratra isan-karazany ny valala ho an'ny balustrades amin'ny tetezana sy ny tohatra, valizy vita amin'ny zoo, aviary valala, fefy bara lehibe ary fanamboarana rafitra misy façade trellis sns.
Stainless vy marika famatsiana vy dia ampiasaina amin'ny ankapobeny ho toy ny fitaovana maritrano marika izay manana singa azo antoka amin'ny ampahany amin'ny fampisehoana ankapobeny ho toy ny fananganana singa, ankoatr'izay, noho ny fangaraharan'izy ireo avo, ny vy vita amin'ny vy vy ary ny meshes mifanentana amin'ny endrika ankapobeny amin'ny ny fananganana mora, na ny fiodinana na mitsangana, dia mahavita mampifanaraka tsy an-kanavaka amin'ny endrika irina faritra izay tsy maintsy arovana.
Ny tariby vy vy matevina dia manolotra fahazoan-dàlana isan-karazany amin'ny fampiasana ny maritrano sy ny famolavolana anatiny, ny diamètre samihafa ary ny habe mesh marefo mamela ny vahaolana namboarina.
Ny marika stainless vy marika ny tariby mesh
1. Maivana, tanjaka avo, mateza, malefaka ary matanjaka ny reraka, fihenan'ny fihenjanana, hery lehibe, ny rafitra ankapobeny dia matanjaka ary dura ble, fiainana fanompoana ao anatin'ny 50 taona.
2. Ny mangarahara tsara, ny endrika marevaka, ny fomba fanaovan-tsarimihetsika, dia azo ampidirina amin'ny tontolo manodidina, akaikin'ny natiora, fiarovana ny tontolo iainana maintso, manana fiantraikany tsara sy fiarovana.
3. Saika tsy mila fikolokoloana ary azo ampiasaina indray.
4. Ny kiraro vy vy azo tanterahina, manome endrika roa-dimensional sy telo-dimensional, isan-karazany ny tariby tariby, ny haben'ny lavaka ary ny habe amin'ny tontonana azo atao mifanaraka amin'ny zavatra takinao.
Previous: Vatosoa vy vita amin'ny vy tariby (karazana ferrule)
Manaraka: Solika maitso vy matevina
Archaeural Rope Mesh